I-Apple ayivumeli abasebenzisi be-iPhone kunye ne-iPad ukuba bonwabele amaQonga oMdlalo weQonga | IPhone iindaba
U-Apple uhlala enqabile ukuvumela ezinye izicelo ukuba zinikeze ukufikelela kwizicelo kunye / okanye imidlalo engafumanekiyo ngqo kwiVenkile yeApple, eqinisekisa isigqibo sayo kwizikhokelo zeVenkile ye App, ngokungathi ibingaphakathi iqumrhu Awunakuthetha naye, umntu ongazimiselanga thethana okanye atshintshe imigaqo nangaliphi na ixesha.
Ukuba iApple ayinelanga ngokwaneleyo ngezikhalazo ezahlukeneyo kwi-European Union abazivezileyo Spotify, yocingo y Rakuten, kunye nophando olwahlukeneyo olwenziwa e-United States kuzo zonke iinkampani zetekhnoloji (hayi ngokuchasene ne-Apple kuphela) ngokuzimela, ngoku kufuneka songeze ityala elitsha, Ityala elichaphazela bonke abasebenzisi be-iPhone kunye ne-iPad.
U-Apple utshilo (ngesithethi) ukuya kweliphakathi I-Business Insider ukuba iinkonzo ezintsha zomdlalo osasazayo ezivela kuMicrosoft noGoogle azizukufumaneka kwiVenkile yeApple ngokwaphula imithetho yeVenkile ye App, ezo imigaqo elawulwa liqumrhu engenakuthethathethana ngayo kwaye kungekho mntu waziyo ngayo.
Xa uGoogle waqalisa ukusasaza inkonzo yomdlalo wevidiyo ngoNovemba ophelileyo, kwakungeyonto ibalulekileyo ukuba ithuba lokuzonwabisa ngemidlalo kwilifu elinikezelwa leli qonga lalingekho kwi-iOS, kuba inani lezixhobo ezixhaswayo lilinganiselwe kuluhlu lwePixel kunye nenye into encinci, ishiya ukuthandabuza emoyeni ukuba inokwenzeka kwixesha elizayo.
Kuyinyani ukuba bekukho amarhe okuba ngenxa yezikhokelo zeVenkile yeVenkile, uGoogle Stadia ngekhe abe nendawo kwi-iOS, akukho qela likhankanyileyo malunga nalo. IMicrosoft iye yavavanya inkonzo yayo yokudlala iinyanga ezimbalwa kule intsha ibizwa xCloud, uphuhliso olugqibileyo kungoku nje xa sele kuvezwe yonke into.
1 Ukuba ufuna ukonwabela ukusasaza imidlalo yevidiyo, iApple ayiloqonga lakho
2 IMicrosoft ithi iApple ishiywe yodwa
3 IApple Arcade yayingeyiyo le nto babeyikhangela abasebenzisi
4 Ekugqibeleni, iApple kuya kufuneka inikezele
5 Kwi-Android akukho ngxaki
Ukuba ufuna ukonwabela ukusasaza imidlalo yevidiyo, iApple ayiloqonga lakho
U-Apple uzama ukuphuma kule meko, ebanga imiba engenanto yakwenza nokhetho olunikezelwa nguMicrosoft kunye noGoogle. Ngokuka-Apple, Ivenkile yeeVenkile yenziwe ukuba ibe yindawo ekhuselekileyo apho abasebenzisi bakhuphela usetyenziso lwabo, izicelo eziqwalaselweyo kwaye kufuneka zilandele izikhokelo ukukhusela abathengi.
Eyokuqala, ngaphambili. Akukho namnye kwezi nkonzo zimbini zosasazo lomdlalo wevidiyo khuphela imidlalo kwisixhobo. Zonke izihloko zenziwa kwiiseva zazo zombini iinkampani, kwaye zithumela umjelo wevidiyo kwii-terminals kwaye ezi ziphawula iintshukumo eziza kulandelwa kumdlalo kumaseva, zibuyisele omnye umsinga wevidiyo kunye nentshukumo oyifunayo.
Kwisiteyitimenti esifanayo, iApple ithi abasebenzisi banenani elikhulu lemidlalo kunye nokusetyenziswa kwiVenkile yeApple, usetyenziso kunye nemidlalo ethi balandela imigaqo efanayo yemigaqo yabo bonke abaphuhlisi.
Inkonzo ebonelelwa nguStadia kunye xCloud Ayinamsebenzi nezicelo kunye nemidlalo esiyifumana kwiVenkile ye App. Ezi nkonzo zibeka ezandleni zethu inani elingenamda lezihloko, izihloko esinokuthi sizidlale nanini na naphi na apho sifuna khona, nokuba kukwi-mobile, ithebhulethi, ikhompyuter, umabonwakude ... ngaphandle kweqonga esilisebenzisayo.
IMicrosoft ithi iApple ishiywe yodwa
UMicrosoft uqinisekisile ukuya phakathi esengozini, Ephendula le ntetho ngu-Apple, esithi oyena nobangela kule meko ngu-Apple, ngubani kuthintela izibonelelo zokuhambisa imidlalo kubo bonke abathengi bayo. Ukwabanga ukuba khange akwazi ukufumana isisombululo nge-Apple ukuzisa i-xCloud yakhe kwiVenkile yeApple.
Nangona kunjalo, sukulahla itawuli kwaye bathi bazakuqhubeka nokufumana indlela yokubanakho ukubonelela ngeenkonzo zabo zeXbox Game Pass kwizixhobo ze-iOS. UMicrosoft uyazi ukuba kungekudala iApple iyakunyanzeliswa ukuba inikezele, nokuba inyanzelisa kangakanani ukuthethelela izigqibo zayo ngezizathu ezingenanto yakwenza nesisombululo esacetywa nguMicrosoft noGoogle.
IApple Arcade yayingeyiyo le nto babeyikhangela abasebenzisi
Xa iApple yaqala ukusebenza kwiApple Arcade, yayikhuthazwa linani elikhulu labasebenzisi abadlala imidlalo kwizixhobo eziphathwayo kunye isixa esikhulu semali ezihamba ezi nkampani. Nangona kunjalo, kubonakala ngathi eli qonga alibonisi nzuzo njengoko i-Apple yayinethemba.
Abanye abaphuhlisi bezihloko ezikhoyo kwiApple Arcade, ibango elivela kuCupertino Bayirhoxisile iprojekthi yabo elandelayo kuba bajonge indlela eyahlukileyo, indlela ebandakanya umsebenzisi kwaye inyanzela ukuba uhlawule inyanga nenyanga ukonwabela ezo zihloko.
Iitayitile ezinje ngeFortnite, PUBG, Call of Duty, Apex ... ukumilisela amaxesha amatsha kwiinyanga ezininzi, amaxesha avumela abasebenzisi ukuba bafumane inani elikhulu lezinto zokuthambisa endaweni ye-10 euro. Ezi ntlobo zezihloko ziyabasebenzisa abasebenzisi kodwa abanandawo kwiqonga elifana nele-Apple.
Ekugqibeleni, iApple kuya kufuneka inikezele
I-Apple, nokuba uyayithanda okanye awuyithandi, nokuba kunyanzelekile kwi-European Union, okanye kuba uyazi, ndiya kunika kungekudala okanye kamva. Ukuthintela ukufikelela kwiinkonzo zevidiyo kumdlalo wefu kubo bonke abathengi bayo akunangqondo, ngokungathi bekungenangxaki kubo, ngokungathi iApple iye yaba yiTshayina apho urhulumente alawula khona abantu ngokomfanekiso wakhe nangokufana naye. I-Apple ayisiyiyo umda ekusebenziseni iinkonzo kubathengi bayo.
Ngeli thuba, isizathu sokungavumeli ezi ntlobo zezicelo ayihambelani nekhomishini engama-30%, ikhomishini enokuncitshiswa njengoko kunjalo Amazon. I-Apple ayifuni ukuba abasebenzisi bayo bayeke ukusebenzisa usetyenziso kunye nevenkile yomdlalo ukulawula izixhobo zabo, ayifuni mntu wumbi ukuba abeke izandla zakhe kwikhekhe elinamanzi angabelani ngalo nabani na.
Kuyaqondakala ukuba iApple ifuna ukuba abasebenzisi bezixhobo zayo basebenzise imali kwiqonga layo, ngakumbi iApple Arcade, kodwa banciphise ukuze bangakwazi ukusebenzisa ezinye iinkonzo Kuqhelekile kwi-oligarchy (ukugcina umgama), into ngelishwa asiqhelileyo u-Apple kule minyaka idlulileyo, kodwa esele iqalile ukuba yingxaki kwinkampani uqobo.
Kwi-Android akukho ngxaki
Kuyamangalisa ukuba ukuba yiMicrosoft xCloud ukhuphiswano ngqo kwiGoogle Stadia, kwiqonga le-Android, iMicrosoft ayizukuba nangxaki ekunikezeleni le nkonzo, inkonzo ethi izakuqala nge-15 kaSeptemba ngemidlalo engaphezulu kwe-100 kwaye iyakufakwa kwiXbox Game Pass.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iapps zokusebenza » I-Apple ayivumeli abasebenzisi be-iPhone kunye ne-iPad ukuba bonwabele amaqonga omdlalo osasazayo
Oku kuchasene ngokupheleleyo norhwebo olukhululekileyo. Ukuba ukhuseleko kunye nokusasaza, akuyi kubakho netflix.
Olona luvo ndilubonayo kukuba boyika ukuphulukana neshishini labo leapile, kodwa ixesha elifanelekileyo liya kuthi ukuba imidlalo yokusasaza ingena okanye hayi kwizixhobo zeapile
UJohn Giannandrea uthetha ngokubaluleka kokufunda ngomatshini eApple